Magnetic Filtration System Vagadziri & Vatengesi - China Magnetic Filtration System Fekitori
Magnetic Plate yeConvey Belt Kupatsanura
Magnetic Plate inoshandiswa kushandiswa kubvisa simbi yekutsika kubva kune inofamba zvinhu inotakurwa mumachute ducts, spouts kana pamabhanhire ekuendesa, masikirini, uye mafirita ekudyisa. Kunyangwe izvo zvinhu ipurasitiki kana pepa pulp, chikafu kana fetiraiza, Mafuta embeu kana zviwanikwa, mhedzisiro ndeyechokwadi kuchengetedzwa kwekugadzirisa michina.
Magnetic Grate Separator ine Multi-Tsvimbo
Magnetic grates separator ine akawanda-matanda anoshanda zvakanyanya pakubvisa kusvibiswa kweferrous kubva kuzvigadzirwa zvemahara zvakasununguka zvakadai sehupfu, granules, zvinwiwa uye emulsions. Ivo vanoiswa nyore nyore mumahopera, poindi yekudyiwa kwechigadzirwa, machute uye kunzvimbo dzakapedzwa nzvimbo dzekutengesa.
Magineti dhirowa yakavakwa neboka remagineti grates uye isina simbi dzimba kana kupenda simbi bhokisi. Iyo yakanaka yekubvisa yepakati uye yakanaka ferrous zvinosvibisa kubva kune akasiyana eoma emahara inoyerera zvigadzirwa. Ivo anoshandiswa zvakanyanya muindasitiri yezvikafu uye indasitiri yemakemikari.
Square Magnetic Grate ine Ndfeb magineti mabara, uye furemu yemagineti grid yakagadzirwa nesimbi isina tsvina. Aya maitiro eiyo grid magineti anogona kuve akagadziriswa zvinoenderana nevatengi 'zvinodiwa uye yekugadzira saiti mamiriro, iyo yakajairwa magineti machubhu akaenzana dhayamita ari D20, D22, D25, D30, D32 uye ect.
Iyo Magnetic Liquid Misungo yakagadzirirwa kubvisa uye kuchenesa mhando dzesimbi zvinhu kubva pamvura mitsara uye yekugadzirisa michina. Feri simbi inofukunwa nemagineti kubva pane yako kuyerera kwemvura uye unounganidzwa pane iyo magineti machubhu kana ndiro-dhizaini magineti akaparadzanisa.
Magnetic Tube inoshandiswa kubvisa ferrous zvinosvibisa kubva mahara inoyerera zvinhu. Ese ma ferrous particles senge mabhaudhi, nzungu, machipisi, inokuvadza simbi yekutsika inogona kubatwa uye kubatwa zvinobudirira